मास्क बेच्दै ८ वर्षीय प्रेन्सा समाजसेवामा भन्छिन काम गर्न केको लाज ? सम्मान स्वरुप १ शेयर गरौं! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
मास्क बेच्दै ८ वर्षीय प्रेन्सा समाजसेवामा भन्छिन काम गर्न केको लाज ? सम्मान स्वरुप १ शेयर गरौं!
उमेरले सानी तर प्रतिभा अनेक । पोखराकी प्रेन्सा रेग्मी उमेरले मात्र ८ वर्षकी भइन् । कक्षा ३ पढ्छिन् । उनको बहुप्रतिभा ४ महिना लामो ल’कडाउनमा निकै खुलेर आयो । विद्यालय जानबाट व’ञ्चित उनीजस्तै बालबालिका प्रेन्साको प्रस्तुति एवं सहयोगी भावबाट प्रेरित बने । तपाईँ पोखरा–१७, बिरौटा पुग्नुभयो भने प्रेन्सालाई मास्क बेचिरहेको भेट्नुहन्छ । उनले केही सातायता आफ्नो घर नजिकै चौतारोमा बसेर मास्क बेच्ने
गरेकी हुन् । को’रोना भा’इरस (कोभिड–१९) संक्र’मण जो’खिम न्यूनीकरणका लागि सर्वसाधारणलाई मास्क बेचेर बचेको पैसा उनले सामाजिक सेवामा लगाउँछिन् । सरकारले पनि यतिखेर अनिवार्य मास्क प्रयोगमा क’डाइ गरेपछि मास्क को’रोनाबाट बच्न अनिवार्य साधन बनेको छ । आयआर्जन कमजोर रहेका परिवारका आफूजस्तै उमेरका साना भाइबहिनीको लागि उनले बचत रकम सहयोग गर्ने गरेको बताइन् । यी सानी
बालिकाले भनिन्, ‘को’रोनाले धेरैजनालाई दुःख भएको छ । कति धेरैले आफूले चाहेको बेलामा खान पाउनुभएको छैन । कापीकलम किताब किन्न पाउनुभएको छैन । उहाँहरुलाई हेल्पको लागि मैले यस्तो काम गरेकी हुँ । ’दह्रिलो आत्मविश्वास बोकेकी प्रेन्सा भन्छिन्, ‘काम गर्नु केको ला’ज ? चो’र्नु–ढाँ’ट्नु त भएन । सबैजनालाई सानोठूलो नभनी काम गरे देशको उन्नति हुन्छ ।’ उनका बाबुआमा बिरौटामै
स्टेशनरी चलाउँछन् । अघिल्लो वर्षदेखि संचालन सुरु सो व्यवसायको नाम ‘नमस्ते पोखरा स्टेशनरी’ हो । बाबुको नाम रामकृष्ण र आमा जयन्ती हुन् । प्रेन्साका एकमात्र दाइ प्रोगेस हुन् । घरनजिकैको शिशु निकेतन स्कुलमा कक्षा ३ की विद्यार्थी प्रेन्सा पढाइमा पनि अब्बल छन् । सधैँ टप टेनभित्रै पर्छिन् । अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न भनेपछि हुरुक्कै हुने उनी विशेषगरी अभिनय गर्न रुचाउने गरेको शिक्षकको अनुभव छ ।
विद्यालयको प्राथमिक तहअन्तर्गत संयोजक खीमकुमारी शर्माले गएको केही महिनाअघि मात्र उनको क्षमताबारे भेउ पाइन् । को’रोना महा’मा’री आउनुअघिको कुरा हो, विद्यालयमा पढाइका अलावा नियमितरुपमा अतिरिक्त क्रियाकलाप हुँदै थियो । कक्षाका करिब १ सय २० जना विद्यार्थीलाई आफूले जानेको क्रियाकलाप गर्न अह्राइयो । तीमध्ये कतिपयले नाचे, केहीले गीत गाए, कतिपयले पेन्टिङ गरे भने केहीले भाषण कला
प्रस्तुत गरे । तर अभिनय रोजेकी प्रेन्साले समसामयिक विषयमा गरेको क्यारिकेचरले सबैजनाको ध्यान खिच्यो । त्यतिबेला सबैजनाले उनको कलाको जादु देख्ने मौका पाए । दह्रिलो आत्मविश्वास बोकेकी प्रेन्सा भन्छिन्, ‘काम गर्नु केको ला’ज ? चो’र्नु–ढाँ’ट्नु त भएन । सबैजनालाई सानोठूलो नभनी काम गरे देशको उन्नति हुन्छ । त्यसको अझ प्रष्फुटन हुने अवसर पायो, लकडाउनको फुर्सदिलो समयमा । लकडाउनले
घरभित्रै खु’म्चिनुपर्दा समय पनि पर्याप्त रह्यो । प्रेन्साले पनि दाजु र बुवाको सहयोगमा मोवाइलमा विभिन्न भिडियो खिचेर फेसबुकमा पोष्ट्याउन थालिन् । यूट्वमा अपलोड भए भने टिकटक पनि बन्दै गए । मुलुकको पछिल्लो राजनीति, को’रोना भा’इरस म’हामारी, नेपाल–भारत सीमा वि’वाद, वैदेशिक रोजगारी, गाउँघरमा बाँ’झो बन्दै गएको खेतबारी, दुःखी गरिब र मजदूरको पी’डा व्यङ्ग्यात्मक शै’लीमा भिडियो
बन्दै गए । सबै उनलाई कण्ठस्थ आउने गरेको यूट्वमै देख्न सकिन्छ । सानै उमेरदेखि नै फरक क्षमता देखेका उनले छोरीले भविष्यमा लय समात्नेमा उनी ढुक्क छ । लकडाउन बेलामा घरमा बस्नुपर्दा छोरीको कला अझै निखार आएको देखेका उनले हरेक भिडियो सेयर गरेर सहयोग गर्छन् । छोरीको कला देखेर केही मिडिया पनि खोज्दै आएको उनले बताए । आमा जयन्ती. पनि सानैदेखि प्रेन्साको स्वभावबारे पूरापूर
जानकार छन् । भनिन्, ‘छोरीको आफूले मात्र नखाने अरुलाई पनि केही दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने स्वभाव छ । निकै ज्ञानी र बुझक्की छ । दोस्रो सन्तानको रुपमा यति राम्री छोरी पाएकोमा निकै खुसी छु ।’ मास्क बेचेपछि बचत भएको रकमबाट प्रेन्साले सानो उमेरका १० जना बढीलाई पढाइको लागि आवश्यक स्टेशनरी सामग्री सहयोग गरिसकेकी छन् । साथै, उनले केही दिनअघि प्रहरीलाई समेत सर्वसाधारणलाई वितरण
गर्ने गरी मास्क दिइन् । उनले स्टेशनरीमा प्रेन्सा स्टलसमेत खडा गरेकी छन् । कसैलाई कापी किन्नेसम्म पैसा नभए, निःशुल्क लिन सकिन्छ । सानैदेखि अरुलाई सहयोग गर्न रुचाउने यी प्रतिभाशाली प्रेन्साजस्तै धेरै बालबालिकाको प्रतिभाको कदर हुनु आवश्यक छ । भविष्यमा के बन्ने भन्ने जिज्ञासामा उनको सटिक जवाफ छ, ‘देशको लागि जे आवश्यक पर्छ, त्यही बन्छु । श्रोत: आदर्श समाज/विजय नेपाल
Previous सकिन्छ आँफुले क्षमता देखाई विश्व रेकर्ड राखौं, सकिन्न अघाडी बढ्नेलाई बाधा नपुर्याऔं: त्रिपाठी
Next रवि लामिछानेको आग्रह : ‘उठौ युवा अब एउटा आन्दोलन सुरु गरौं’ ( स्टाटस सहित)